Raju Hirani Iyo Ranbir Kapoor Oo Dacwad Lagu Soo Rogay Filmka Sanju-na Daawashadisa Lama Hubo (+Video) – Filimside.net
Raju Hirani Iyo Ranbir Kapoor Oo Dacwad Lagu Soo Rogay Filmka Sanju-na Daawashadisa Lama Hubo (+Video)
Waxaa dacwo lagu soo rogay Filmka Sanju ee looga hadlaayo nolosha Sanjay Dutt kaasona uu hogaamiye ka yahay Ranbir Kapoor halka uu Director ka yahay Rajkumar Hirani waana mashruuc xiiso weyn yeeshtay kadib markii goos goosyadiisa la daawaday.
Balse qolada shahaadada filmka bixiyaan ayaa filmkaan dacwo kusoo rogeen kadib markii ay ku eedeyaan kooxda mashruucan in muuqaal kamid ah filmkaas uu yahay mid sharafka dalka iyo maxaabiiska meel oga dhacaayo.
Ninka lagu magacaabo Prithvi Mhaske oo katirsan qolada shahaadada filmka bixiyaan the Central Board of Film Certification (CBFC) ayaa sheegay in uusan meesha ku jirin muuqalka Ranbir biyaha wasaqda lagu so furaayo xili uu xabsiga ku jiro waxuuna yiri ninkaan oo hadlaayo.
“Goos gooska filmka waxaan ku aragnay marka Sanjay Dutt noloshiisa laga hadlaayo muuqaal uu xabsiga kujiro kaaso lagu soo furaayo biyo nijaas ah oo wasaq ah markii aan arinkaas baarnayna maba jiraan xabsi sidaas loolugala dhaqmo ma xaabiista marka waxaan u aragnay in muuqaalkan uu yahay mid sharafka xabsiyada dalka meel oga dhacaayo sido kalena maxaabiisleyda si wanaasgan ayaa looga taxadara.”
“Dhanka kale horey dhowr film oo nolosha Gangster-da looga hadlaayo waan aragnay walina ma aynan arag muuqaal lamid ah midkaan hadii kooxda filmkaan aysan wax ficil ah ka bixinin muuqaalkan ama aysan ka jawaabin hadii aysan cadeemo heysanina ka saari waayan meesha waxaan dacwad gaarsiin doona ilaa maxkamada sare si mashruucn gabi ahaantisaba loo joojiyo oo aan loo daaban iskabada shahaado aan siine.”
Hadii Rajkumar iyo kooxdisa filmka cadeen cad la imaan waayaan ama muuqaalkas jari waayan lama daawan doono filmk Sanju sida qoloda Shahaadada bixisa shaaca ka qaaday ayago ku goodiyen inee maxkamada sare u gudbin doona dacwadooda.
Hadii aadan horey u arag muuqaalkas halkaan hoose ka daawo goos gooska filmka:
Waxaa Aqrisay 1,452
ali cadde says:
waxaan u rajeynaa inuu guuleesto
ama ay cadeyn u helaan arinka lagu heesto